Grand Theft Auto Sy Mihoatra izany : Ny Zava-Misy Mampalahelo Momba Ny Fiainana Ao Amin’ny ‘Repoblika Entim-Bahoakan’i Donetsk’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2015 5:25 GMT
Manao ny DNR ho toy ny seho nivoaka avy hatrany tao amin'ny lalao lahatsary Grand Theft Auto ny tatitra nampahafantarin'ny Anonymous International. Sary nafangaron'i Tetyana Lokot.
Tao anatin'izay volana vitsivitsy lasa izay, namoaka andiana fampitam-baovao manazava amin'ny antsipirihany mikasika ny zava-misy mampalahelo amin’ny fiainana andavanandro ao amin'ny “Repoblika Entim-bahoaka nanambara tena ao Donetsk” (DNR) ny Anonymous International, vondrona Rosiana mpanaporitsaka tahirin-kevitra. Ny heloka bevava mitombo izay tsy izy, ny korontana, ary ny fanolanana sy famonoana mahatsiravina no mampijaly ny mponina any amin’io faritra ambany fifehezan'ny mpisintaka ao amin’ny ilany atsinanan'i Okraina io ankehitriny, araka ny vaovao navoakan'ny Anonymous International.
Toa hoe namoaka ny fisian’ny fifampizarana mailaka nanomboka ny faran’ny 2014 ka hatramin'ny fiandohan’ny 2015 teo amin’ny manampahefan’ny biraon'ny mpampanoa lalàna sy ny Minisiteran’ny Fiarovam-Mpanjakana ao DNR ilay fiporitsahana farany nivoaka ny 2 Septambra, .
Mivezivezy ny “mpitarika”, fa mbola t*** be foana ny zavatra rehetra, na ny tahirin-kevitra sasany avy amin'ny Minisiteran’ny Fiarovam-Panjakana ao amin’ny DNR
Araka ny tatitra lavabe nataon’ny Minisiteran’ny Fiarovam-Panjakana, mamaritra ny ankamaroan'ireo mpitarika ny DNR ho toy ny vondron’ny mpanao heloka bevava tarihan'ny Praiminisitra Alexander Zakharchenko ny pejy voalohany, izay naseho tao amin'ny bitsika etsy ambony, amin’ny fikasàna hanararaotra ny fahefana ananany mba hanangona fidiram-bola tsy ara-dalàna ary hangatahana kolikoly. Araka ny famintinana nataon’ny The Insider, ny tatitra dia manome ny antsipirihany ny fomba fampihorohoroan’ny mpiadin’ny DNR ny mponina eo an-toerana amin'ny alalan'ny firotsahana amin'ny fakàna an-keriny, halatra, fampijaliana ary indraindray famonoana olona.
Manome fitantaràna manokana momba ny fampietrena iainan’ny mponina ao Donetsk ny tatitra iray hafa nomanin’ny Biraon'ny mpampanoa lalàna ao DNR tamin'ny Janoary 2015, ary mamaritra ihany koa ny sasany amin'ireo tena meloka ao ambadiky ny fanararaotana. Ahitana indrindra ny fakàna an-keriny fiara, antontan-taratasy, ary zava-tsarobidy hafa, fanagadràna ny fianakaviana ataon'ireo olona mitam-piadiana sy ny fanjavonany, fakàna an-keriny ny fananana ara-barotra sy an'ny tena manokana ny sasany amin'ireo fitarainana matetika napetraky ny olom-pirenena. Manambara koa ny tatitra fa matetika mahavoarohirohy ny andian-tafika ao Oplot sy Vostok ny fitarainana momba ny hetsika tsy ara-dalàna ataon’ireo milisy mitam-piadiana.
Raha ny momba ny andia-miaramila ao Vostok, vondrona efa zatra ady avy ao Tsetsenia ary manana fifandraisana akaiky ao amin'ny Minisiteran’ny Fiarovana Rosiana, izay naparitaka tao amin’ny ilany atsinanan'i Okraina tamin'ny lohataonan'ny 2014, dia hoy ny fanamarihan'ilay tatitra tafaporitsaka:
Araka izany, manazava ny fananganana andian-jiolahy mitam-piadiana, napetraka hanohizana ny fanangonan-karena manokana na amin'inona na amin'inona ny asa tsy ara-dalàna ataon’ny vondrona mitam-piadiana avy amin’ny andian-tafika ao “Vostok”, fa tsy amin'ny alalan'ny fanafihana mitam-piadiana sy ny fakàna ny fifehezana ireo foto-drafitrasa indostrialy ary ny fametrahana fanaraha-maso ny fikambanana ara-toekarena ihany, fa koa amin’ny fifehezana tanteraka ny faritry ny tanàna sy faritany sasany ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan’i Donetsk, izay manampy ny fanasoketàna sy ny fitokana-monina iraisam-pirenena ny firenenay.
Ny fiporitsahana farany manome ihany koa antsipirihan'ny fifanekena voalaza fa natao nandritra ny fivoriana tamin'ny Oktobra 2014 teo amin’ny filohan'ny DNR, Alexander Zakharchenko, ny lehiben’ny heloka bevava an’ny amin’ny faritra sy Rinat Akhmetov, iray amin'ireo olombitsy matanjaka indrindra any Okraina, ary mpiara-miombona antoka mifandray akaiky amin’ny Filoha teo aloha Viktor Yanukovych. Toa mitarika mankany amin'ny fametrahana ny olon’i Akhmetov amin'ny toerana manan-danja ao amin'ny rafitry ny governemantan’ny DNR ilay fifanarahana, ka manamafy ny fanjakazakan’i Zakharchenko amin’ny fitondrana, ary mizara toerana ao anaty governemanta sy fananana indostrialy ho an’ny manampahefana any amin’ny faritra, anisan'izany ny lehiben’ny mpanao heloka bevava sy ny olona mifandray amin'ny Yanukovych, izay mipetraka any Rosia ankehitriny, rehefa nandositra an’i Okraina tamin'ny Febroary 2014. Raha ny amin'ny hoavin’ilay faritra ambany fifehezan'ny mpisintaka, mampiseho ny tanjona hisian’ny fahaleovantena feno ho an'i Donbas ao Okraina sy ny sata mitovy amin’izay nomena an’i Krimea tamin'ny 1991 ilay fifanarahana.
Ho valin'ny fanontanian’ny media mikasika ny fiporitsahana, nilaza ny biraon’i Akhmetov misahana ny fifandraisana amin'ny gazety fa tsy maneho hevitra momba ny torohay “diso sy feno fihantsiana” mivezivezy amin’ny tranonkalam-pifandraisana izy.
Mahagaga, manambara ihany koa fanadihadiana anatiny ny mponina izay lazaina fa natao tamin'ny volana Desambra 2014 tany amin'ny faritra tazonin’ny mpikomy ny fiporitsahana vaovao. Araka ireo antontan-kevitra ireo, lazaina mazava tsara ho “tsy mitontongana ihany, fa tsy misy amin'ny ankapobeny,” ny fahatokisana ny fitondran’ny DNR, raha etsy ankilan’izany, lazaina fa voavfintin'ny teny filamatra hoe “jiolahy ny manam-pahefana” ny ao an'eritreritry ny be sy ny maro. Voamarika ho misongadina koa ny fahatsapàna ny fandaozana sy ny fahadisoam-panantenana amin’ny haavon'ny fanampiana amin'ny maha-olombelona avy any Rosia. Hita ho nihena 77 lasa 48 isan-jato ny salan’isan’ny olona te-hiaraka amin’i Rosia, ary mizara hevitra amin'ny fahaleovantena feno ho an'ny DNR sy ny fizakantena any Okraina ny sisa tamin'ny mponina. Mamaritra ny mpitarika mpisintaka teo aloha sady olom-pirenena Rosiana, Igor Strelkov, ho toy ny olo-malaza indrindra eo anivon’ny mpanao politika ny fifidianana, nefa voamarika fa nizàka fitontonganana be indrindra vao haingana teo anivon'ny mpitondra eo an-toerana ny lazan’i Zakharchenko. Nomena koa ny fitantaràna ny korontan’ny mponina tao an- tanànan'i Shakhtersk nohon’ny hatezerany manohitra ny fandrobàna sy ny tsy fahampian’ny fanampiana amin'ny maha-olombelona.
Nampahafantatra andiana tatitry ny polisy ao Donetsk ihany koa ny Anonymous International, tany am-piandohan'ity lohataona ity, nanome sary manjombona tsy misy hafa amin'izany koa momba ny fiainana ao amin'ny faritra fehezin'ny mpisintaka any amin'ny ilany atsinanan'i Okraina.
Ny tatitra avy amin'ny Ministeran'ny Atitany ao amin’ny DNR mikasika ny hetsika stratejika, ny heloka bevava ao anatin'ny daroka baomba
Manazava amin'ny antsipirihany mikasika ny tranga fakàna an-keriny mahatsiravina, halatra, fanolanana, sy vono olona ireo lazaina ho tatitry ny polisy ireo, ​​ary mitantara ihany koa ny hetsi-panoherana tsy nahazoana alàlana nataon’ny mponina ao an-toerana.
Manamarika ny The Insider, ao anatin'ny famintinana ny fiporitsahan’ny tatitry ny polisy, fa na dia iray tamin'ireo faritra misy ny heloka bevava ambony indrindra ao amin'ny firenena aza i Donetsk teo aloha, mampiseho fahasimbàna mahatsiravin’ny toe-draharaha ao amin'ny faritra ny torohay vaovao:
Araka ny hitantsika, raha inoanao ny antontan'isan’ny polisy Okrainiana ao amin'ny faritra Donetsk ianareo, latsaky ny vono-olona iray isan'andro no nitranga talohan'ny ady. Hatramin’ny naha-ampahany ihany amin'ny faritra manontolon’i Donetsk ny DNR, mety tsy ho matetika ny tranga famonoana olona (indrindra noho ny fihenan'ny isan’ny mponina vokatry ny fifindran’ny mponina sivily). Na izany aza, mampiseho ny mifanohitra amin'izany ny tahirin-kevitra navoaka – isan'andro misy vono-olona 1 ka hatramin’ny 9 (salan’isa 3 eo ho eo), ary tsy tafiditra amin’izany rehetra izany ny nanjavona sy ireo hita maty izay tsy ho fantatra mihitsy ny antony nahatonga ny fahafatesana. Noho izany, nitombo imbetsaka ny fitrangan’ny heloka bevava feno herisetra na aiza na aiza.
Manasongadina ihany koa ny karazana heloka bevava voalaza ao anantin'ilay tatitry ny polisy niporitsaka ho toy ny mahatsiravina kokoa ny The Insider, anisan'izany ny fakàna an-keriny amin'ny antoandrobenanahary ataon’olona manao fanamiana miaramila, fanolanana zaza, ary ny halatra mitam-piadiana (indray—amin’ny toerana ho an'ny daholobe sy andro mazava izany rehetra izany),” ary nanatsoaka hevitra fa lasa “mifanohitra amin'ny toe-tsaina sy mivelatra kokoa” ny heloka bevava.
Raha mbola mitohy mihondinkodina ny fanontaniana mikasika ny fomba nahazoan’ny Anonymous International ny torohay izay navoakany, ary nahoana ny vondrona no mampita torohay sasany rehefa mitranga izany, maro no mihevitra fa tena marina ny tahirin-kevitra sy ny fifampizarana mailaka navoakan'ny Anonymous International , raha sarotra ny hanamarinana izany.
Toa manamafy indray ireo fiporitsahana farany ireo fa ny fiantraika mahatsiravina nateraky ny fifandonana tao atsinanan'i Okraina no loza lehibe indrindra nadonany amin'ireo mponina sivily monina any.